MOV ọkpụkpọ: Olee otú Play QuickTime MOV 100% gara nke ọma? -
> Resource> QuickTime> Olee otú iji Play QuickTime MOV 100% ọma (Yosemite gụnyere)
Ọ bụ eziokwu na eleghị anya ị na-apụghị egwu MOV (QuickTime) na Windows Media Player na QuickTime ọ bụrụ na ị nwere mmezi codec ma ọ bụ codec mkpọ arụnyere na iru gị mgbasa ozi ọkpụkpọ. Ma, e nwekwara ndị ohere na gị MOV (QuickTime) faịlụ-apụghị ka na-ejikari egwuri ezie na ị na kwukwara na ndị ọzọ codecs gị media ọkpụkpọ na mgbalị dị ukwuu. Ọnọdụ nwere ike ịbụ na i nwere ike inwe ụda ma ọ dịghị foto mgbe egwu na-akpọ ha. Ọfọn, bụ n'ebe ihe nile ike MOV ọkpụkpọ na-egwu MOV 100% gara nke ọma?
Ee, m azịza ya bụ: a MOV Ntụgharị + ọ bụla mgbasa ozi ọkpụkpọ = ihe nile ike MOV ọkpụkpọ. Ọ pụtara na ị pụrụ iji oké MOV Ntụgharị iji tọghata MOV (QuickTime) enyi na enyi video usoro maka gị MOV ọkpụkpọ, ọbụna ihe ọ bụla were.
Video Ntụgharị bụ dị ike otú ahụ MOV Ntụgharị, na enyemaka nke ị nwere ike were were egwu MOV na ihe ọ bụla mgbasa ozi ọkpụkpọ, ọbụna na-egwu ha na ihe ọ bụla Apple ngwaahịa dị ka iPhone, iPad na Apple TV wdg nnọọ na-eso ndị nkuzi ebe a iji mezuo ọrụ dị nnọọ ole na ole clicks.
1. Import MOV faịlụ (QuickTime) na MOV video Ntụgharị
Mbụ, ị chọrọ nwụnye na-agba ọsọ a smart MOV Video Ntụgharị. Mgbe ahụ, ị nwere ike ịmalite mbubata MOV (QuickTime) faịlụ ka ngwa a.
1) na-aga "tọghata"> "Tinye Files" Ibu Ibu MOV faịlụ na ị chọrọ ka ịgbakwunye.
2) Ma ọ bụ i nwere ike ozugbo ịdọrọ & dobe MOV faịlụ a usoro.
2. Họrọ otu mmepụta format
Ọ bụrụ na ị chọrọ igwu MOV na Windows Media Player, ị nwere ike họrọ WMV dị ka mmepụta usoro. Ma ihe mgbaru ọsọ gị bụ mbubata MOV faịlụ ka QuickTime, VLC ma ọ bụ ndị ọzọ Apple ngwaahịa dị ka iTunes, ebe a, ị nwere ike ịhọrọ MP4 na ịtọ H.264 ka video codec. Ma ọ bụ, ị nwere ike bulie kachasị mmepụta format dị ka gị kpọmkwem ojiji. Ka H.264, i kwesịrị ịnọgide na-see "Mwube" nhọrọ.
3. Malite MOV (QuickTime) akakabarede
Kụrụ "tọghata" button iji tọghata MOV (QuickTime) gị họrọ usoro. Akakabarede ga-a mgbe. Ị nwere ike ka ọ na-agba ọsọ na ndabere.
Cheta na: Nke a MOV video Ntụgharị nwekwara ike na-akwado converting ọ bụla ọzọ usoro MOV, dị ka WMV ka MOV.
Wondershare Nso nso a tọhapụrụ a dị ike video player- Wondershare Player. Ọ na-akwado dị iche iche video na ọdịyo formats, gụnyere MOV. Ma ọ bụ n'ezie mfe iji ngwa a nke nwere ọrụ na onye-Enyi na Enyi interface. Ọ na-agụnye ihe ndị bụ isi buttons: play, kwusi, zuru-ihuenyo na ụfọdụ ndị ọzọ mere na ị ga na o siri ike itinye. Ọzọkwa ọ bụ nnọọ free! Dị nnọọ wụnye a dị ike video ọkpụkpọ na-enwe gị niile videos ugbu a. Mgbe iji ya, m n'aka na ị ga-echefu banyere ihe ọ bụla isi ike nwere ike ime!